Indlela efanele manicure: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, izici kanye nezincomo
Izipikili ube Isikhombisi esibalulekile uzilungise namasiko. Ukunakekela izinzipho Kulula uma wazi izimiso. Akuwona wonke umuntu uyazi indlela yokukwenza manicure kwesokudla. Akwanele ukuthola isipho lamathuluzi, namanje bazi uzisebenzise kanjani. Abanye baye ngokushesha ulahle, futhi ukunikeza okuthile imimese. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Abanaso zonke ukuya izifundo manicure. Ziningi zokuqeqesha ezibonisa inqubo kumahhala. Kodwa abantu abafani, isikhumba cuticle at ezahlukene zonke. Indlela zakudala ukuba manicure, lokuyintfo lefundziswa ezikoleni ezithile, ukukhuluma ngazo zonke izinkinga futhi ihlanganisa ubuchwepheshe ephelele. Noma ngabe Isiqeshana sakho khulula ivumela ezicashile?
Ake sibheke amathiphu ambalwa kusukela master mayelana nokuthi ungakwenza kanjani kahle manicure. Okokuqala, kumelwe ulungiselele amathuluzi okudingayo. It sikelo ukuze ilungiswe cuticles noma udlawana ngenjongo efanayo. Kufanele kube ebukhali ngokwanele ukuze singathwesi akuqede isikhumba, hhayi likhiphe ube izingcezu, futhi usike.
Ukuhlolwa engenziwa ethafeni iphepha napkin: owawasho ukuncishiselwa akufanele kusenze esisuka zezendlalelo udwani izicubu. Ngaphandle kukhona cut cacisa imiphetho bushelelezi - ithuluzi isikhathi sokukhipha imimese.
A amazwi ambalwa lenduduzo intombazane ithola ezibizayo manicure isethi: zonke udlawana ezibizayo ayizinkulungwane ezinhlanu ukukhulula non-waphenduka. Ukuze ajabule ngisho - kusho ithuluzi izinga.
amafayela Nail ukuthi kudingeka kufanele gritnosti (leli nani olwalwenza ngayinye isentimitha sikwele) esiyalwe ngayo. Yezipikili zemvelo, lesi sibalo kufanele kuphela 180 namatshana, hhayi ngaphezulu. Little ngangokunokwenzeka - kuze kufinyelele 240 namatshana, kodwa Imi kungaba eside.
Ukukhethwa kuyinto ingilazi ifayela nail, kodwa kungcono ukuthenga ezitolo okhokhelwayo. Eshibhile amafayela nail ngokushesha ukulahlekelwa impahla yabo futhi baqala xova izipikili.
Pusher (Pusher cuticle) kanye bushelelezi (ngembazo) bavame ezihlanganiswe ithuluzi elilodwa, kulula kakhulu. Sinenkosi metal ukusika imiphetho, nakho kumelwe igcinwe ingenayo abukhali.
Kanjani ukwenza manicure: inqubo incazelo
Ngo manicure zakudala (ibizwa ngokuthi ukuncishiselwa yokuhlanzeka) izigaba ezintathu: nail ekubumbeni, maceration (ingalo lehliselwa okugeza), cuticle ukususwa.
Nail ekubumbeni uhlale yomile. izinzipho Wet akukwazi sawdust they yodwa rastreplyutsya, futhi kudingeke silinde ukuba ome.
Maceration ivuliwe uhlangothi, inkosi iqala nge umunwe kancane, nezinye iminwe ngalesi sikhathi kufanele sibe okugeza. Ukuthatha eyodwa umunwe, balukhulume izinqubo zabo futhi cuticle ezinamafutha akahle, kusale emoyeni.
Uma zonke isithupha, ukushintsha amanzi okugeza bese ngihlaliswa esandleni wesibili. Nakuba thina asaphrosesa isithupha sakho, walungisa isandla yesibili. Qala manicure wakhe, futhi, umunwe kancane.
Ngemva wenziwa izinzipho degreased nail ukuvenisha sisetshenziswa, bese, emva omiswe, namafutha futhi lehla kuya cuticle.
Kukhona isitatimende esichaza indlela ukwenza manicure kwesokudla.
1. ekubumbeni izinzipho:
Kukhishwe obuphelele ngokweqile okuqoqiwe izinzipho ngaphansi isinqumo esinokulinganisela.
Uhlangothi ubhekene opilivaem nail ngokuhambisana ukuma ezikhethiwe (isikwele, okusaqanda, alimondi).
Emakhoneni eshelelayo futhi bahlanza sawdust (uhlevane ngaphansi izinzipho) buff.
2. okugeza engeza insipho ewuketshezi, bleach usawoti njengoba oyifunayo, bese ngihlaliswa esandleni sami.
3. Thatha omunye ngomunwe, omisiwe ithawula:
Push roller proximal.
Pterygium esusa bushelelezi, nokususa ngokucophelela ke kusukela ngaphansi cuticle. Kufanele kubunjwe "ephaketheni" okungukuthi, phezu kwesikhumba ipuleti nail asisho anamathele, futhi asimboze.
4. Sika sikelo cuticle noma udlawana. Ngo emakhoneni lapho babanjwa isiguqo, siphakamise ithuluzi zibheka nisike amancane ukulimala.
Ngakho obukwenza nabanye izipikili.
Abaningi bacabanga ukuthi ukwenza manicure ekhaya futhi uhambisane imithetho magciwane. Esikhathini nokucwala zisebenzisa autoclaves - ukufana kwamazwi kuhhavini. Ekhaya ungasebenzisa cooker kuhhavini, ukwaba le njongo ugqoko ekhethekile.
Ukudayiswa izitolo ezikhethekile nail babe kraft izikhwama. Ungathenga them they azibizi. Kodwa ungaqiniseka ukuthi akukho molecule ithuluzi angawi emathileyi ukudla.
amafayela Nail futhi orange izinti kungenziwa ofakwe isixazululo magciwane professional ngendlela esiyalwe ngayo. Lokhu kuzokwenza kunikeza isivikelo contact ngephutha nge ukhunta isikhumba, igciwane warts, isifo sokusha kwesibindi kohlobo nokungcola like.
Nhlangothi zombili manicure zakudala: Imibono
New Century olusha arsenal nail abaculi. Lokhu manicure amasethi, amafayela nail gritnosti ehlukahlukene kusho ukuthambisa cuticles.
Kukhona uhlobo olusha manicure - kuhlanganiswe. Sihlanganisa izakhi Classic European-cut futhi edging.
Indlela manicure kahle, ubuchwepheshe obusha? Into yokuqala ukukhumbula sendlela yokusebenzisa inguqulo yakudala. Abanye imisebenzi kungenziwa lula ngokusebenzisa umshini nail, kanjalo kuphela ngokuqapha.
Okukushoyo ukuthambisa cuticles ngesisekelo izithelo acid - umsizi enkulu ekulweni keratosis. izandla kakhulu ezomile lokuqala kusetshenzwe antikutikuloy e nail emikhulu, khona-ke ibekwe endaweni ugqoko.
Uma izandla zisesimweni esifanele, maceration ongakwazi ukuzenza. Kunalokho, sebenzisa ithuluzi ukuthambisa cuticles futhi ukwenza zonke izinyathelo manicure zakudala.
Ngeshwa, le omatasatasa emakethe ingxenye global bakhangwa abakhiqizi abangathembekile. imikhiqizo yabo musa iyahlangabezana nezindinganiso futhi ngokuvamile yingozi izinzipho zakho. Ake sixoxe kokubili.
Muva nje, amathuluzi amabili avele ukusiza nail master: Ceramic ifayela nail inselo sobumba. Sichaza indlela yokukwenza manicure kwesokudla usebenzisa lezi amadivaysi.
Ziklanyelwe ukuba ukusebenza isikhumba esomile. Lokhu kuyadingeka ukuze eminye imisebenzi Isicelo egandayiwe. Ngavele kumelwe bathi ukususa cuticle ngeke zisebenze. Kodwa ukususa pterygium - a plenochku mncane, umba lisuke ngaphansi cuticle ngekukhula nail - ngokuphelele.
Kuphela kufanele kwenziwe ezomile, ngaphandle kokusebenzisa antikutikulu. Ngokuvamile amantombazane wasebenzisa uzipho phakathi amaseshini salon manicure lapho ufuna ukushintsha sula nail. Ngemva kokukhipha enamathela ubudala, siwela ngokunembe inselo nail ku roller proximal, kokukhipha pterygium regrown. Yena exfoliate njengoba ufulawa. Ukuxubha wonke ibhulashi ezingadingekile, qala ukusebenzisa ijazi elisha ukuvenisha.
Bobumba Nail Ifayela - umsizi kuhle ukucutshungulwa ezinamasondo. It ngobumnene kususa isikhumba okwe ungalungisa ukuma izinzipho. Ngemva ukusebenza izinzipho zakhe uwoyela lisetshenzisiwe cuticle.
Futhi manje izindaba ezimbi
Zonke izimakethe, izingubo ezitolo kanye nezitolo ezinkulu ukunikela penny amathuluzi manicure amasethi. Ziyize, ngisho izingane. Umthengi, usebenzisa lezi izinto bangakhohlwa kanjani ukwenza manicure.
Enemy nail amakhosi - Manicure ekuphambukeni. kakhulu Umklamo insimbi ibonisa ukuthi kuhloswe ukuba banyakamisa nail lamagquma. Wotho ezithinta metal ithuluzi onqenqemeni, kuqinisekisa cutting of isikhumba ibhande. Kodwa ususe ngokucophelela cuticle regrown ngeke zisebenze.
Elinye ithuluzi, ezishibhile ifayela nail - kwezindlela ezikahle ukuze ebesengenile emikhawulweni ipuleti nail. Ngokuvamile, basuke Akulotshiwe inombolo gritnosti kodwa azizwa - kuyinto 120. Lokhu isetshenziselwa kuphela izinzipho yokufakelwa. Ukusebenzisa phezu yi kwemvelo foliation nezinzipho crumbly.
Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, ungenza ekhaya manicure, akuthathi kakhulu. Uma uchitha isikhathi esiningi banakekele cuticle, it is hhayi kulindeleke ukuba sikhule ngokushesha. hambisa Permanent eceleni roller proximal ukuhlanza isikhumba nail ezakheke iba elunge. Permanent nail sula uyomenzela lwaleli semi isiyingi izinzipho, sizothinta amandla abo nobuhle.
Funda ukwenza ilungelo manicure, futhi uzophawula nxazonke!
Ungabhalisa kanjani ku-Skype? Bhalisa nge-Skype mahhala futhi masinyane
PAZ PAZ 3237. 3237: ezibekiweko lobuchwepheshe